Ariel, Qoraa SmartMe ah
Dom » Maqaallada uu qoray Ariel
Homekit, netatmo, Netatmo Albaabka
Netatmo Doorbell waa albaabo ka socota gurigaKit. Cod-sameeyaha ugu horreeya ee aan dhihi karo - waan kugula talinayaa! Iyo is dhexgalka Apple TV? Waa sheeko cirfiid ...
HTC, HTC VIVE Pro, vr
Iyaga oo ka faa'iideysanaya dalab horudhac ah oo xaddidan, kuwa jecel ciyaarta ayaa fursad u leh in ay ku dhammaystiraan riyadoodii VR ee qiime jaban. Qiimaha xayeysiinta waxaad ka heli doontaa kan ugu cusub HTC VIVE PRO @ cusub HTC VIVE Pro 2 muraayadaha indhaha, fasalka qiimaha leh ...
IoT, News, Home smart
assa abloy, iot, arrinta, yale
ASSA ABLOY waxay shalay ku dhawaaqday inay taageereyso Isbahaysiga Heerarka Isku xirnaanta (horay loo oran jiray Isbahaysiga Zigbee) iyo Matter, oo ah heer cusub oo codsi IOT ah oo ay heli karaan horumarayaasha rubuca labaad ee 2021. Matter, oo horey loogu yaqaanay Mashruuca CHIP, ayaa ...
kamarad, kaamirada shirka
Alio wuxuu soo bandhigayaa nooc kale - PTZ10xFHD. Waa kamarad PTZ ah oo leh darajo dhaqdhaqaaq jireed oo 170-degree ah iyo 10x zoom optical ah. Hawlahani waxay kuu oggolaanayaan inaad si xor ah u adeegsato kamaradda ...
nololeedka, dib u eegista
Halkan waa! Isbarbardhiga labada caday ee sonicha ugu caansan! The Oclean X Pro dhalaalaya iyo badalkiisa cajiibka ah - Oclean X Pro Elite!
robot, roomba, qolka roomba
iRobot waxay soo bandhigeysaa nooca ugu dambeeya ee arjiga iRobot Home shaqooyin dheeri ah oo ka dhigi doonta qorsheynta nadiifinta xitaa mid aad ufiican Hadda moodooyinka 'iRobot Roomba' iyo Braava waxay awoodi doonaan inay tusaale ahaan; qiyaas waqtiga saxda ah ee aad nadiifinaysid naftaada, ama bilow ...
Mootada korontada, News
Baaskiil elektiroonig ah oo cusub oo wata laba nuugid naxdin leh, xakamaynta maraakiibta iyo mashiinka 350W - Rider RS ​​Sport
mooto, mootada korontada, Feeraha, fuushan e-sport
Mootada 'Rider RS ​​Sport' waa talo soo jeedin loogu talagalay dadka jecel dareenka daran - waxay u shaqeyn doontaa labadaba maalin kasta iyo xaaladaha dhuleed ee adag. Baabuurkan elektaroonigga ah ee loogu talagalay dadka waaweyn iyo dhalinyarada, mahadnaqa 8,5 giraangiraha inji iyo xagal ...
News, casriga ah
OPPO - Telefoonno kale oo casriyeysan oo leh casriyeyn loo sameeyay ColorOS 11
midab, OPPO, Oppo Reno
Shirkadda OPPO ayaa billowday howsha cusbooneysiinta barnaamijka softiweerka kale. Nooca ugu dambeeyay ee nidaamka ColorOS 11, oo ku saleysan Android 11, ayaa ka muuqan doona Poland, iyo kuwo kale taxanaha Reno4 iyo taxanaha A. Vistula, hada nidaamka ...